Bhose August 12, 20142014-08-12T10:49:28+00:002015-04-06T12:41:29+00:00 Nchekwa onwe Insurance, Featured
Nkịtị uche na-achọ ka e n'ozuzu a catch na ọtụtụ pụrụ iche na-enye. Ọbụna na ọ dịghị a catch ọ bụ ihe ezi uche na-eche na e nwere ike ịbụ. Nke a na-eche echiche ga-ekwe ka ị nọrọ na gị nche na-elele amụọ ọma tupu ị na-n'ime ha. Mgbe ụfọdụ anyị pụrụ-agba n'ime ọnyà n'ihi na anyị na-adịghị eme anyị omume n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ga-esi kwa smart banyere ya ma ọ ọsọ ọsọ. Lee ụfọdụ nke afia mkpa ka ị maara nke mgbe ịzụta ụgbọ ala mkpuchi mkpuchi.
Ịzụchapụta mgbe mbụ ebugharị
Nke a bụ a mbido si ndudue ka. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkachamara n'ihe banyere otú ị ga-maara na ị na-na-ezi mkpuchi na price ma ọ bụrụ na ị na-adịghị gị atụnyere nhọrọ? Mgbe ị bụ kwa nkọ ga-esi gị ọhụrụ ụgbọala kpuchie ngwa ngwa ka ị pụrụ ụgbọala gị nwere ike ọnyà onwe gị n'ime ihe ezughi oke ma ọ bụ oké ọnụ mkpuchi.
Ọ na-ewe awa ole na ole na-akasị ụbọchị ịchọ maka ụgbọ ala. Ị nwere ike mfe elele adabara atumatu na dịgodị. Ị na-adịghị aka ụgbọala tupu ị nwere ike nweta a see okwu n'ihi na ọ. Ọ bụrụ na ị na-akpọ a ore ahia-adị kwa ụbọchị dị iche iche na ụgbọ ala nkọwa na-a see okwu ha ga-nri gị na-ngwa ngwa. Otú ọ dị, online see okwu nyiwe ekwe ka ị na-eto eto ibe maka ihe ọ bụla e nyere ụgbọala. Ị nwere ike iji ngwá ọrụ a dị ukwuu dị ka ị chọrọ ebe ọ bụ na ị na-arụ ọrụ.
Ịzụ Ezughi oke mkpuchi
Otu n'ime ihe ndị kasị emehie motorists ime bụ na-eche na atumatu ga-abụ nnọọ dị ọnụ ala karịa ma ọ bụrụ na ha na-aga n'ihi na kacha nta ala chọrọ ụgwọ cover. The adịchaghị ihe dị iche n'etiti a isi mkpuchi na a keukwu onye pụrụ ịbụ naanị di na nwunye nke narị dollar na ụfọdụ karịsịa mgbe ị na ịzụ ahịa gburugburu ntị.
Basic cover bụ zuru kacha nta na ị na-gwara ịzụta zuru ezu ụgwọ ekpuchi kama. Ọzọkwa, ndị a atumatu inye-enweghị oti mkpuchi maka gị onwe gị losses. Ụgbọala bụ n'ozuzu nnukwu investments ọtụtụ ndị. Iwepụta $5,000 n'ihi na otu agadi eji akpaaka ga-iyi ka a uba n'ihi gị mgbe ị na-adịghị ego. Mgbe ị na-ịkpata ọma ma na-enwe ego ị ga-akwọ ụgbọala a $50,000 ụgbọ ala na agbanyeghị. N'ọnọdụ abụọ ọ ga-abụ a nnukwu ulo oru mbo ghara amụma mkpuchi.
N'ozuzu, ndị dị elu nke deductibles na ala ndị premiums na-. Ya mere, ma ọ bụrụ na a akpan akpan mkpuchi ụgbọ ala see okwu a otutu dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ n'ime ha ị kwesịrị ị na-elele deductibles. Nke a bụ ego ị ga-akwụ ụgwọ nke gị n'akpa uwe gị insurer nwere ike ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ nke na-emebi. Ọ bụrụ na ị ka o kwa elu ị pụrụ imesị-akwụ ọtụtụ emebi onwe gị. Na ị ga-ahụ ya nke siri ike obibi ya ma ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu nzukọ mere a afọ.
Ewepu ọkwọ ụgbọala
A ọkọlọtọ iwu kwesịrị ikpuchi onye ọ bụla bi n'otu ezinụlọ na gị nakwa dị ka ihe ọ bụla mgbe ụfọdụ ọkwọ ụgbọala. Mgbe ị na-anabata a ọnụ ala akpaaka mkpuchi see okwu nwere ike ị gaghị elele onye na-ekwe ka ụgbọala n'ụgbọala gị. Ọ bụrụ na ị na-agaghị na-ekwe ka onye ọ bụla ọzọ na-anya ụgbọala ụgbọala insured ị pụrụ n'ezie chọrọ amachi ọkwọ ụgbọala na-policyholder ma ọ bụ ndị e depụtara ọkwọ ụgbọala na-azọpụta ego. Ọ dị mkpa ịma onye bụ na ndị na-adịghị insured ụgbọala n'ụgbọala gị ma jikwaa ya ya.
Special Ọnọdụ na Exclusions
Lezienụ anya maka pụrụ iche ọnọdụ ndị dị iwu wordings. Ọmụmaatụ, ụfọdụ atumatu nwere ike ikwe ka insurer iji aftermarket akụkụ ịrụzi ihe insured akpaaka na-esonụ na-emebi ya. Nke a nwere ike ịbụ otu nnukwu nke ma ọ bụrụ na i nwere otu agadi ụgbọala na ị na-ezi ego n'ihi nke a ọnọdụ. Ma ị na-achọghị ọnọdụ ndị dị otú mgbe i a pụtara ọhụrụ na ọnụ ụgbọala.
Ọ dịghị Site n'ikike Car
Ọzọ ahụkarị njirimara ọnụ ala atumatu bụ na ha nwere ike ghara inye a n'ikike ụgbọ ala mgbe gị na ụgbọala na-rụziri. Ọzọ, nke a nwere ike ịbụ otu nnukwu nke gị na ị pụrụ n'ezie na-ahọrọ na-ego ugbu a kama na-a n'ikike ụgbọ ala ma ọ bụrụ na ụgbọala gị mgbe ego n'anya mebiri emebi. Dị nnọọ na ọtụtụ ndị na-eme mkpesa mgbe ihe omume na ha na-adịghị nyere a n'ikike ụgbọ ala mgbe e nweghị ndị dị otú ahụ ndokwa ha iwu.
Anya isi niile atumatu bụ otu
A otu akpaaka insurer nwere ike àjà ọtụtụ ọkwa dị iche iche nke atumatu na anya isi niile atumatu na-ere n'ahịa ga-adị bụ a bit amaghị. Kwa iwu nwere nta ma ọ bụ nnukwu ọdịiche ọ bụla ọzọ. Nke a na-adịkarị ekere ke price. Dabere na cheapautoinsurance.net, "I nwere ike na-a na-erughị afọ iwu na ka ịkwụ ụgwọ zuru adịchaghị mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị na-ada ka ịzụ ahịa gburugburu".
Anya isi mba ndị yiri gafee Market
Ọzọ, nke a bụ ihe amamihe na-adịghị na-atụ anya n'ihi na ọ bụla ụlọ ọrụ dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu dị ka ọ na-akawanye. Ha nwere proprietary ize ndụ na adịchaghị mgbawa na a pụrụ iche n'ụzọ nke na-agba ọsọ ha azụmahịa. Mgbe a na ụlọ ọrụ dị nnọọ ewu na ha ga-ndammana-enwe ike bulie ndị kasị mma nke ụyọkọ na okwu nke ize ndụ. Mgbe ha na-ahụ a nta ịrịba ama nke ihe ize ndụ ha nwere ike ngwa ngwa ha ahịa. Otú ọ dị, a obere ewu ụlọ ọrụ ga--ha ahịa na ego iji jide n'aka na ha nwere ike imeri n'elu azụmahịa.
Ịṅa site Monthly obere
N'ezie, ọ bụ mfe ịkwụ ụgwọ site kwa ọnwa obere e doro anya banyere ya. Otú ọ dị, mkpuchi premiums ndị ruru n'ihi na ugwo na oge nke Uru. Ọ bụrụ na a ụlọ ọrụ na-ekwe ka ị na-agbasa ugwo ha na-enye gị n'aka. Nke a n'ozuzu na-abịa ná a na-eri. Ha na-emekarị na-ana mmasị nakwa dị ka àjà pụrụ iche ego maka ndị na-akwụ ụgwọ n'ihu na na zuru. Ị ga-ejedebe na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na unu na-agbasa ugwo.
Ịzụ ihe dị oké ọnụ ka amụma mkpuchi Ụgbọala
Ọtụtụ motorists zụtara ụgbọala na ghọtara e mesịa na ọ bụ oke ọnụ ka amụma mkpuchi ọhụrụ ha nọkwasịrị n'elu. Mgbe ị na-atụle egwuregwu ụgbọala, SUVs, 4x4s na pụrụ iche ndị ị ga-maara na o nwere ike ịbụ oké ọnụ ka amụma mkpuchi ha. Premium iche nwere ike ịbụ ihe dị ka ugboro atọ ọzọ n'etiti oke nke ụgbọ ala A na Car B.
Ị adịghị mkpa ịmata ọtụtụ ihe nzuzo na-oké ọnụ ụgbọala mkpuchi. Ma, mkpa ka ị mara ma na-maara nke a ole na ole aghụghọ. Mgbe ahụ, i nwere ike na-azọpụta ego ọhụrụ mgbe ọhụrụ. Gwụsịrị na-edebe ndị a bụ isi ụkpụrụ ike na-eri gị ego.